Midnight Thoughts – Gniap
Published by admin on July 21, 2020 July 21, 2020
အချိန်ရရင် အပေါ်က မူရင်း article ကိုလဲ ဖတ်စေချင်တယ်။ ၂၀၁၅ က ရေးထားပေမယ့် ဒီနေ့အထိ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားလောက မှာ အသုံးများနေဆဲဖြစ်တဲ့ ‘စကားတခွန်း’ နဲ့ သက်ဆိုင်လို့ပါ။ ပြောနေကြအတိုင်း ဆို – “ဒီစာတွေက သင်ပီး ဘယ်မှာ သုံးရမှာလဲ?” “ဒီသင်ခန်းစာတွေကို လက်တွေ့ ဘယ်လိုအသုံးချရမှန်းမှ မသိတာ” စသဖြင့် ဆင်ခြေပေါင်းများစွာကို ကျနော် ကျောင်းသားဘဝတုန်းကတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြောခဲ့မိဖူးပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အဲဒီမေးခွန်း (ဆင်ခြေ) က လုံးဝ မှားတဲ့အကြောင်းကို မူရင်းဆောင်းပါးထဲမှာ ရေးထားတာပါ။ သူ ရေးထားတဲ့ စာအရှည်ကြီးထဲက သဘောကျတဲ့ တပိုဒ် ကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ဘာသာပြန်ကြည့်ထားပါတယ်။
—————————————— x —————————————–
> ဘာသာပြန် <
“When am I going to use this?” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုက အလိမ်အညာကြီးဗျ ။ မေးခွန်းမေးသူ က (သိလိုတဲ့) အကြောင်းအရာ X ရဲ့ အသုံးပြုပုံ၊တန်ဖိုးကို ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်တစား စဥ်းစားမနေဘူး ။ မေးခွန်းထုတ်သူ က လက်မြှောက်အရှုံးပေးတဲ့ သဘောနဲ့ အော်ဟစ်နေတာ။ အကြောင်းအရာပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတဲ့အပေါ် တာဝန်ယူခြင်းမရှိပဲနဲ့ မေးခွန်းမေးသူ ဘက်က အချိုးတမျိုး ပြောင်းပြတယ်။ ဒါ ငါ့အမှားမဟုတ်ဘူး ။ မင်း အမှား ဆိုတဲ့ သဘော။ ဒါက ငါ စိတ်မဝင်စားလို့ မဟုတ်ဘူး ၊ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပီး ခက်ခက်ခဲခဲ မကျော်ဖြတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး လို့ ဆိုချင်နေတာ။
> Original Paragraph <
And the question itself — “When am I going to use this?” — is nearly alwaysalie,afront. The asker is not genuinely contemplating the use-value of Material X; rather, he or she is merely announcing the intent to give up. Instead of saying this, however — instead of taking responsibility for lack of ability or interest in the material — the asker would like to suggest, It’s not me, it’s you. It’s not that I am uninterested or havingahard time with it.
——————————————- x ———————————————
ဒီစာပိုဒ်ကရော ၊ ဆောင်းပါးတခုလုံးကပါ ကျနော့်အတွက်တော့ အတွေးပေါင်းများစွာ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝ ၇ နှစ်တာကျော်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလိမ်အညာတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းခဲ့မိတာလား? ဒီဆောင်းပါး အဆုံးမှာ ပြောထားသလို ‘မသိဘူး ဆိုတာက အဆင်ပြေပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် မသိတာ ကို မသိကြောင်း မသိပဲ အပေါ်က မေးခွန်းသုံးပီး ဘာတွေ သင်နေရမှန်းမှ မသိတာဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနဲ့ အချိန်တွေ မကုန်မိစေဖို့ ဒီစာကို ရေးမိတာပါ။
Writing at July 22 (12:00AM)